UARIANA GRANDE UQESHA UMZOBI WOKUQALA KWIQELA 'LELIZWI' - IINDABA
UAriana Grande Uqesha uMzobi wokuqala kwiQela ‘leLizwi’
U-Ariana Grande wenza amatyala akhe njengomqeqeshi kwi-NBC Ilizwi ngoMvulo, nge-20 kaSeptemba iphambili yexesha lama-21, kwaye yena okanye wazisa izixhobo ezikhulu ngokukhawuleza xa kwakufika apha ukukholisa abantu abanethemba lokubabamba.
Ngexesha loPhicotho-zincwadi lweeMfama lwesibini, olwalubonisa imvumi uKatie Rae ecula uMaren Morris Amathambo. Phambi kokuba kuqalwe uphicotho, uRae wathetha malunga nobunzima awayenezakhono emva kokunikezela ngoku kunyana wakhe oneminyaka emi-3, kwaye yena okanye yena wakhankanya ukuba kulapho waqala khona ukuthanda umculo kaMorris.
Uphele engena ngezihlalo ezintathu ezijikayo kubaqeqeshi noGrande, Kelly Clarkson, noJohn Legend bonke bembetha iqhosha. UBlake Shelton, kungenjalo, wayeka.
IGrande Got 'Cutthroat' Kwiindlela zakhe zokuChukumisa
Kwakucacile kwasekuqaleni ukuba uGrande wayenqwenela uRae ukuba abethe abasebenzi bakhe, kwaye yena okanye yena wayeza kwenza into enokuba yindlela yokumfumana apho.
isidlo sangokuhlwa kumagazi aluhlaza
Xa uRae wayalela abaqeqeshi wayenexesha elinzima emva kokunikezela ngonyana wakhe kwaye yile ndlela awufumana ngayo umculo kaMaren Morris, uClarkson wabelane ukuba uneminyaka emihlanu ubudala.
UGrande wachaza ukuba uya kuba nomntwana ukuba ufuna njengendlela yokufumana uRae ukuba asebenzise abasebenzi bakhe.
Andiyiyo, nangona kunjalo ndingathanda! wakhankanya ngaphambilana kokubandakanya ukuba uyadlala.
Intsomi yongeze, ndizame awona am afanelekileyo ukuba nam umntwana kuwe ngokufanelekileyo.
umnxeba ophela ngo-2020 ucacisiwe
IGrande yaya kwi-Extremes
Kwinqanaba elinye xa iLegend izama ukufumana uRae ukuba amkhethe, uGrande wabetha iqhosha lakhe elipinki, kunye nomculo wakhe Enkosi U, Okulandelayo kwaqala ukuthatha inxaxheba, kakhulu kuClarkson. Wawa phantsi ngenxa yokuhleka kwakhe eGrande.
U-anderson usebenzisana kunye no-andy cohen ubudlelwane
Ndiyakholelwa kwimvelo yakho yonke, ndinqwenela ukukunceda ukuba uzenze ngokwakho njengegcisa, uGrande wathembisa. Ndingaba mtsha apha, nangona kunjalo ndinobungcali obahlukeneyo ngokufanelekileyo. Ndixakeke kakhulu kanye kwisithuba seminyaka eli-10 yobomi bam. Ndiye esihogweni kwaye kwakhona. Singasebenza ngokudibeneyo senze kwaye sicule, kwaye ndingangumqeqeshi wakho.
Intsomi ikhankanye ukuba uyayithanda iLizwi elinika oomama ithuba lokulandela ubuchwephesha babo.
Into endikhetha ukuyithetha, xa nigqibile ukugqiba, ngubani ogqiba ekubeni ngumqeqeshi wenu? UShelton wongeze emva kweendlela ezahlukeneyo zokuphikisana ngaphambili nangasemva.
URae uphendule wathi, Ndiyanithanda nonke, kodwa ndiyakholelwa ukuba ndiza kuhamba kunye noAriana.
Ekugqibeleni ndathenga igcisa lam lokuqala, uGrande wayalela ikhamera yedijithali. Yena kunye nenani leempembelelo ezifanayo. Ndonwabe kakhulu kukuba ekumsebenzi wam. Awuyazi!
kris jenner umama mj
Ukongeze wanika uRae isipho ngaphakathi kohlobo lwebhokisi yasemini ethandekayo yeAriana ebandakanya izongezo zokutya, iti kunye neepakethe zobusi ukunceda ukuthoba ilizwi lomculi.
Ndiyathanda ukwazi ukuba abantu bacula ngokuchanekileyo, utshilo. Ndingathanda amagcisa am abe nexesha elide.
Ilizwi lisasazwa ngeMivulo nangooLwezibini ngentsimbi yesi-8. EMpuma nasePacific kwi-NBC.
Izigaba: Hulu Hollywood Iindaba
ophumelele umzalwana omkhulu we-veto
UGordon ramsey kwi-cocaine
ixesha lama-30 umceli mngeni kubaphangi
Mdala kangakanani uDick van dykes umfazi
ishedyuli yomzalwana omkhulu ngeveki
Kutheni le nto igqwirha elibomvu liphulukene nesitayile sayo